မျက်နှာ Cream OEM / လိမ္မော်ရောင် / OBM | မျက်စိ Cream Customize | ထောက်ပံ့ရေးမျက်နှာမျက်နှာဖုံး | မိတ်ကပ်စက်ရုံ | facial cleanser | Lotionmanufacturer ရင်ဆိုင်ရသည်
အသားအရေထိန်းသိမ်းမှု - အလှကုန် - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ
OEM / ODM / Design / Private Label ကိုတစ်နေရာတည်းဝန်ဆောင်မှုပေးပါ
Guangzhou ciyan အလှကုန်ကုမ္ပဏီ，Ltd မှ. ၎င်းကိုတည်ထောင်ခဲ့သည် 2009. ၄ င်းသည်အလှကုန်ပစ္စည်း R&D ကိုအထူးပြုထားသောခေတ်မီပေါင်းစပ်ထားသောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်, ကုန်ထုတ်လုပ်မှု, နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများနှင့် OEM / ODM / OBM အမှတ်တံဆိပ်အပြောင်းအလဲနဲ့. ငါတို့ပိုင်ဆိုင်သည် 8000 စတုရန်းမီတာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့် GMPC ၏အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုလွန်ပြီ,ISO ကို 22716, FCC သည်,FDA က,CE etc.With ကျော်လွန် 10 နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံများ. ကတည်းက 2011, ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ကိုရီးယား CHO DANG တက္ကသိုလ်နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်, တောင်ကိုရီးယားအရည်အသွေးမြင့်အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပုံသေနည်းကိုချမှတ်. အချို့သောအရေးကြီးသောကုန်ကြမ်းများကိုတောင်ကိုရီးယားမှတင်သွင်းသည်. ကြီးမားသောပြည်တွင်းအလှကုန်ပစ္စည်းကွင်းဆက်စတိုးဆိုင်များ၏သုံးပုံတစ်ပုံသည်လုပ်ငန်းလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်ပူးပေါင်းနေကြသည်. ၏နှစ်တွင် 2018, ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ပြည်တွင်းလည်ပတ်မှုကျော်လွန်သည် 60 သန်း.
Sun Repair Gel ပြီးနောက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီထက်ပိုပါတယ် 10 အလှကုန်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိပြီးလက်မှတ်နှင့်မူပိုင်ခွင့်များစွာရရှိခဲ့သည်.
အရေပြားစောင့်ရှောက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်, ခြောက်သွေ့ခြင်းကဲ့သို့သောအရေပြားပြproblemsနာအမျိုးမျိုးကိုဖြေရှင်းပါ, မှောင်မိုက်သိုက်, ဝက်ခြံပေါက်တယ်, အိုမင်းခြင်း, အရေးအကြောင်းတွေ, အသားအရေ sagging, Exfoliation, စသည်တို့.
သဘာဝအော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်များ, သဘာဝအပင်ထုတ်ယူပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်း, အရေပြားကိုမထိခိုက်စေခြင်း. အဆီပြန်မှုအပါအဝင်အသားအရေအမျိုးအစားအားလုံးအတွက်အထူးကောင်းမွန်သည်, အထိခိုက်မခံ, ဝက်ခြံပေါက်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်.
သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု, ဒီဇိုင်းအထုပ်ပေး, ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်, ပုဂ္ဂလိကအထုပ်, အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု, ကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်မှု, သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း, စသည်တို့. ဝန်ဆောင်မှုများ.